Ọ bara uru ịzụta ụgbọ mmiri? | Akụrụngwa n'efu
Ọ bara uru ịzụta ụgbọ mmiri?
na drones O doro anya na ha bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị na-akpata mmetụta kachasị njọ n'ụwa niile. Otú ọ dị, tupu iwere nzọụkwụ ịzụta otu n'ime ngwaọrụ ndị a ọ dị mkpa iji dozie obi abụọ ụfọdụ, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ nwere ọnụahịa dị elu.
Taa na-eme ihe omumu nke ole na ole ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-emekarị, m ga-anwa ịza ya n'eziokwu na arụmụka na ajụjụ a na-enye aha isiokwu a na nke ahụ abụghị onye ọzọ karịa; Ọ bara uru ịzụta ụgbọ mmiri?.
Nke mbụ, ịmara ma ọ bara uru ịzụta ụgbọ mmiri, anyị ga-amarịrị ụdị drone anyị ga-azụ. Ahịa ahụ amalitela n'oge na-adịbeghị anya ma anyị nwere ike ịchọtalarị ngwaọrụ na ọnụ ahịa ego na nke anaghị agafe euro 50, mana n'ezie nhọrọ na ọrụ ndị drones a na-enye anyị dị oke oke.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta ụgbọ mmiri maka ihe dị ka euro 50, anyị ekwesịghị ịgabiga ókè ma ọ bara uru ịzụta ya ma ọ bụ na ọ bụghị n'ihi na anyị agaghị emefu nnukwu ego. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ezigbo mmiri, ịkpọ ya n'ụzọ ụfọdụ, anyị ga-eji ihe ndị ọzọ akpọrọ ihe. N’etiti ha ikwesiri ịbụ ojiji anyị ga-enye ya, yabụ na anyị ga-eji ya ma ọ kachasị ma ego anyị ga-akwụ bụ nke kwesiri ya dabere n’akụkụ abụọ ndị mbụ.
Jiri obi ebere Echere m na taa mmadụ ole na ole ga-aba uru ego dị mma na ike dị mma., na ọ bụ na ojiji a ga-enye nwere ike belata, belụsọ naanị n'okwu ụfọdụ.
Ọ ga-amasị m maka drone idekọ m mgbe m na-agba ọsọ ma ọ bụ soro m oge ọ bụla m na-apụ n'okwu ahụ, mana na nke m, echere m na ọ baghị uru itinye ego na drone n'ihi na anaghị m enye ya ihe ọ bụla nke ahụ na-akwụ ụgwọ maka ego ruru.
I chere na o kwesiri taa iji zụta drone na ọnụahịa nke ngwaọrụ ndị a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Ọ bara uru ịzụta ụgbọ mmiri?
Tsunami, onye enyemaka ikpeazụ nke Arduino
Arduino Gemma, mmalite nke imekọ ihe ọnụ n'ọdịnihu